Axmed Cali: "Ilmaha qooyska ka soo sheegta la iskama qaato" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Axmed Cali, wuxuu ka warramay howlaha waaxda adeegga bulshada ee ilmaha iyo dhallaanka. sawir: Gaar loo leeyahay
Axmed Cali: "Ilmaha qooyska ka soo sheegta la iskama qaato"
La daabacay fredag 5 oktober 2018 kl 15.13
Jaranjarada nidaamyada dalka ka dhisan iyo noocyadooda kala duwan ee muddada soo jirey ayaa mararka qaarkood caqabado ey kala kulmaan bulshada dalka ku cusub ama aan wax badan kala socon habka ey nidaamyadaasi u shaqeeyaan.
Marar badan ayey soo noqnoqdaan cabashooyin ka soo yeera waalidiinta soomaalida dalkan ku dhaqan ee qaarkood laga qaado masuuliyadda ilmaha oo dabadeed lagu meeleeyo goobo kala duwan.
Dhanka kale wuxuu qorayaa mid ka mid ah xeerarka dalka ka jiraa inuu waalidku leeyahay masuuliyadda ilmihiisa inta uu ka gaarayo da’da qaangaarka ee 18 jirka.
Sidee haddaba isu qabaneyaan labada nidaam ee midina xaq waalidka u siinayo masuuliyadda ilmaha, midka kalena hayadda ku shaqada leh u ogolaanaya in masuuliyaddaa lagala wareego waalidka.
Axmed Cali wuxuu sida aad maqleeyseenba wax ka bartay culuunta maamulka arrimmaha bulshada ee loo yaqaanno socinom, waxaanuna wax ka weeydiiney howlaha waaxda ilmaha iyo dhallaanka howlaheeda, habka ay u shaqeeyso iyo xeerarka haga. Sidoo kale waxaannu Axmed Cali wax ka weeydiiney arrimmaha la xiriira goorta uu masaxmo xadka u dhexeeya hayadaha iyo qooyska ee lagu soo fara gelin karo masuuliyadda waalidka. Bal aan ku hor maro maxay salka ku haysaa howlaha waaxda adeegga ilmaha iyo dhallaanka ee adeegga bulshada. Su’aashaa isaga oo ka jawaabaya wuxuu Axmed Cali sheegay inay ku dhisan tahay xushmad iyo in laga taxadaro xaaladda inaan halka ay taagan tahay laga sii adkayn:
Masuuliyadda adeegga hayadda adeegga bulshada, gaar ahaan waaxda ilmaha iyo dhallaanku waxay saameeysaa dhammaan bulshada ku dhaqan degmada noocyadeeda kala duwan, ma noqoneeysaa howshan ilmaha mid lagu degdego in si sahlan loo qaato. Middaasina oo uu Axmed Cali sheegay in jawaabtu tahay Maya.
Inuu qooyska laftiisu adeeg caawimaad ka dalbado waaxda, ama shakhsi bulshada ka mid ah cidduu doonaba ha ahaadee ogeeysiin uga gudbiyo waaxda, iyo sidoo kale ey hayadaha xiriirka leh ilmaha ey qoraal welwel ah waaxda uga gudbiyaan waa sababaha waaxdu ugu tallaabsato xiriir ay qoyska la yeelato. Axmed Cali iyo mar kale:
Xuquuqda uu walidku leeyahay ee masuuliyadda ilmihiisa waxaa ku lifaaqan sida uu uga soo baxo waalidku masuuliyadda saaran iyo ilaalinta xuquuqda dhallaankooda. Waana howl ay masuuliyadda ilaalinteedu leedahay waalidka ka sokow waaxda ilmaha iyo dhallaanka. Waxaa haddaba muhiimad ku fadhida beeyadda uu dhallaanku ku nool yahay iyo dabeecadda ilmaha qudhooda, sida uu sheegay Axmed Cali oo bartay culuunta maamulka arrimmaha bulshada.
Waalidka ayaa u fahmi kara xadgudub kolka lagu soo fara geliyo ama xiriir ay la soo sameeyso waaxda adeegga bulshada ee ilmaha iyo dhallaanka, hase yeeshee uu sheegay Axmed Cali in loo baahan yahay in wada shaqeeyn dhab ah lala sameeyo, islamarkaana ey jawaabaha waalidku ka mid yihiin qodobbada go’aannada lagu gaareyo:
Waalidka ku kalsoon waalidnimadiisa iyo bayadda uu ilmihiisa ku barbaariyo, isla markaana ilaaliya xuquuqda ilmaha ayaan u baahnayn inuu ka welwelo in faraha ay la soo gasho waaxda adeegga bulshada ee ilmaha iyo dhallaanka. Inkasta oo waalidka qaarkood yiraahdaan ilmaha ayaa waalidka ugu handada iney waaxda ku dacweeyaan.
Middaaina oo haddii xitaa ay dhacdo aanay ahayn mid howlwadeennadu sidaa u qaataan ee baris lagu hubiyo inay jiraan iyo in kale, sida uu sheegay Axmed Cali.